स्वास्थ्य – Page6– MediaNP
काठमाडौँ, २५ पुस । अहिले स्मार्ट फोन हाम्रो जीवनमा दैनिकी बनिसकेको छ । प्राय धेरै मानिसको दैनिकी नै स्मार्ट फोन बाट सुरु हुने गर्छ । आधुनितकतासँगै चलेको स्मार्ट फोनको बढ्दो प्रयोगले मानिसमा विभिन्न प्रकारका समस्याहरु
महिलालाई कुन समयमा यौन प्रस्ताव राख्दा उचित हुन्छ ?
MediaNPप्रकाशित मिति: , ०, ००८:१९0
काठमाडौँ,२४ पुस । सामान्यतया महिनावारी भएको ५ देखि ७ दिन भित्रमा महिलाहरुलाई यौन चाहना बढी हुने भएकाले यो समयमा यौन प्रस्ताव राख्नु उचित हुने एक अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको छ । यस विषयमा एक हजार महिलामा
काठमाडौँ,२४ पुस । गर्भ अवस्थामा यौन सम्पर्क राख्न हुन्छ हुँदैन् भन्ने विषयमा प्राय धेरै दम्पतिको चासोको विषय बन्ने गरेको छ । तर यस विषयलाई विज्ञहरुले तिन भागमा बोडेका छन् । १.पहिलो ३ महिना २.दाश्रो तिन महिना ३.तेश्रो तिन
के तपाई माघे संक्रान्तिमा तिल र खुदोको लड्डु बनाएर खान चाहनुहुन्छ ? त्यसोभए यसरी बनाउनुहोस् (विधीसहित)
काठमाडौ । यो जाडो महिनासँगै अब केही दिनपछि मकर संक्रान्ति आउदै छ । यस समयमा विशेषगरी लडडु बनाएर खाने चलन रहेको छ । त्यसमा पनि तिल र खुदोको लड्डुलाई चाही महत्वपूर्ण मानिन्छ । किनभने